Ukwehla kwamanzi kulindeleke e-Uzbekistan - umagazini i- "Potato System"
Umthamo wamanzi wokunisela umhlaba wezolimo e-Uzbekistan wehle ngo-25%, kusho abezindaba kuMengameli uShavkat Mirziyoyev.
“Kulindeleke ukuthi ngesikhathi sokunisela kulo nyaka ukuhlinzekwa kwamanzi kuzokwehla ngo-25% kunezinga elijwayelekile. Ngakho-ke, ukugwema ukusebenzisa amanzi ngokumosha kuyinto ebalulekile, ”kusho ulwazi.
Futhi noMongameli izwe waveza ukuthi kungenzeka ukonga amanzi angama-cubic metres ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu. Okokuqala, ngenxa yokwethulwa kobuchwepheshe bokonga amanzi kumahektha ayizinkulungwane ezingama-430 ezindawo zezolimo.
Ngalesi sizathu, intela yokungenisa i-polyethylene ne-polypropylene ikhanseliwe ngo-Okthoba 1. Ngakho-ke, isidingo sobuchwepheshe nokonga amanzi sizokwaneliswa.
Ngaphezu kwalokho, umongameli wasayina isimemezelo ngoDisemba. Uhlinzeka ngokwethulwa kobuchwepheshe obonga amanzi kwezolimo.
Futhi, imixhaso enanini lama-soums ayi-1,5 trillion. Okuqaphelekayo, kudingeka uxhaso ukuxhasa ukuqaliswa kobuchwepheshe bokonga amanzi ngo-2021. Ngakho-ke, zizokwakhiwa ngenxa yokukhethwa UMnyango Wezezimali Ama-soums angama-330 billion avela kwisabelomali sikahulumeni kanye ne-1 billion soums yezimali ezibolekiwe. Izimali ezibolekiwe kungenzeka zikhangwe ezikhungweni zamazwe zomhlaba jikelele.
Tags: ukuchelela umhlaba wezolimoUzbekistan
Inhlangano "Soyuzkrakhmal" iyaqhubeka nochungechunge lwezifundo zokuvuselela
Isitshalo sokucubungula amazambane